एनआईसी एशिया बैंकको दुई नयाँ शाखा कञ्चनपुरको बेदकोट र महोत्तरीको सम्सीमा - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
एनआईसी एशिया बैंकको दुई नयाँ शाखा कञ्चनपुरको बेदकोट र महोत्तरीको सम्सीमा
प्रकाशित मिति: ३० जेष्ठ २०७५, बुधबार
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले पछिल्लोपटक दुई नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । बेदकोट नगरपालिका, वडा नं ५, दैजि, कञ्चनपुरमा स्थापना गरेको बेदकोट शाखा र सम्सी गाँउपालिका, वडा नं ६, महोत्तरीमा स्थापना गरेको सम्सी शाखाको बुधबार औपचारि उदघाटन गरिएको छ ।
बेदकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोक कुमार चन्दबाट बेदकोट शाखा र सम्सी गाँउपालिकाका अध्यक्ष मो. शेख फारुकबाट सम्सी शाखाको विधिवत् उदघाटन गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकलाई आम जनमानसले गरेको प्रगाढ विश्वास, अगाध स्नेह र बैंक प्रतिको भरोसाले गर्दा मुलुकभर २२४ शाखा कार्यालयहरु, २१० एटिएम, १४ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ९ वटा शाखारहित बैंकिङ मार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जाल भएको बैंक हुन सफल भएको छ ।
बैंकको वासलातको आकार रू १६६ अर्ब भन्दा बढि पुगेको छ भने बैंकको कुलकर्जा करिब रू ११८ अर्ब र कुलनिक्षेप करिब रू १४१ अर्ब पुगिसकेको छ । हालसम्म यस बैंकमा जम्मा ग्राहकको संख्या करिब ११ लाख ५० हजार रहेको छ ।
यो सँगै वासलात, कुल कर्जा तथा कुल निक्षेपको आकारको हिसाबले यो बैंक निजी लगानीमा स्थापित बैंकहरु मध्ये अग्रणी स्थानमा रहेको बैंकको दाबी छ । साथै संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको उत्कृष्ट अभ्यासलाई यस बैंकले पालना गर्दै आएको छ ।
आज २७ औं विश्व अपाङ्गता दिवस
काठमाडौं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पीडा भने उस्तैछ, तर औपचारिकताका लागि सोमबार २७ औं विश्व अपाङ्गता दिवस […]
भोलिबाट मुग्लिन–नारायणगढ सडक चौबिसै घण्टा खुल्ला (सूचना सहित)
काठमाडौं । रातको समयमा दैनिक ६ घण्टा बन्द हुँदै आएको मुग्लिन नारायणगढ सडक भोलिबाट ४ दिन सम्म २४ सै घण्टा […]
काठमाडौँ । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले […]
अमेरिकाको तेल प्रशोधन केन्द्रमा बाढी पस्दा इन्धन संकट हुन सक्ने
भदौ १६, असनेपाल न्युज । हार्वी नामको आँधीका कारण टेक्सासको एक तेल प्रशोधन केन्द्रमा शुक्रबार बाढी पसेपछि […]
नेपाल चिनाउन यसरी लागिपरे नेपाली युवा
अस्ट्रेलिया । जति टाढा उति माया गाढा ! पछिल्लो समय प्रवासमा उठ्दै गरेको नेपालित्वको भावनाले यो उक्ति […]
एन आर एन अध्यक्षमा पुनः शेष घले निर्वाचित
असनेपालन्युज । अन्तत :गैर आवासीय नेपाल संघ (एनआरएन)को अध्यक्षमा पुनः शेष घले निर्वाचित भएका छन् । बिहीबार […]